कसरी घर मा समुद्र buckthorn तेल के? तरिका को एक चयन
कारण बिना Buckthorn स्वास्थ्य को larder भनिन्छ। यो धेरै बेरी-फल बाली भन्दा भिटामिन सी को सामग्री हो, र यो मा भिटामिन ई को एकाग्रता तिनीहरूलाई बीच 1st स्थान ओगटेको छ। यो comprises esters Glycerol र उच्च फैटी एसिड, र अन्य जैविक सक्रिय पदार्थ को। समुद्र-buckthorn चासो बढ्छ - Povljana यो बोट को सबै नयाँ प्रजातिहरू।
समुद्र buckthorn तेल - धेरै रोगहरु लागि उपचार। यसलाई व्यापक बल्न, शीतदंश, एक्जिमा, psoriasis, विभिन्न dermatitis, मोटोपना, गुदा fissures, ग्रीवा क्षरण, erythematosus को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। मुखशोथ, adenoids, गलसुआशोथ, sinusitis, पुरानो rhinitis सफलतापूर्वक व्यवहार गर्छन्। यो पेट मा र duodenum 12 मा कलेजो र gallbladder को bile ducts देखि पत्थर निकाल्नु, अल्सर निको पार्न मद्दत गर्छ। लाभदायी प्रभाव तेल inhalation pharyngitis र माथिल्लो श्वसन पर्चा रोग। तेल दल्नु बाल हानि संग खोपडी दुरुस्त राखेको छ। यो बिरामीको अवस्था, छाला को जोखिम प्राप्त सुविधा, पाठ्यक्रम lucheterapii मा प्रयोग गरिन्छ esophageal क्यान्सर।
समुद्र buckthorn तेल कसरी
सफा तेल अलग र त्यसपछि गरेर मज्जा फल को रस को औद्योगिक अवस्थामा समुद्र buckthorn प्राप्त - केक र आफ्ना परिष्कृत भर्नु बीउ वनस्पति तेल, एक विशेष प्रविधि अनुसार एक बहु-चरण-विसारक उपकरण मार्फत यो पारित गरेर पछि लागे। तेल दुवै प्रकारका मिश्रण चिकित्सा व्यवहार मा प्रयोग गरिन्छ जो, यो प्राप्त। यसलाई उज्ज्वल सुन्तला, एक विशेषता सुगन्ध र स्वाद संग बाक्लो छ। तपाईं बजार मा घर बनाएको समुद्र buckthorn तेल किन्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले कुन गुण छ कसरी प्रमाणित गर्ने? यसबाहेक, यो गाह्रो छैन, त्यसैले विश्वसनीय - यो आफैलाई तयार गर्न राम्रो छ। कसरी घरमा समुद्र buckthorn तेल? त्यहाँ तयार धेरै तरिकाहरू छन्।
सरल र किफायती तरिका
शुद्ध तेल प्रत्यक्ष चिसो थिचिएको द्वारा पाकेको जामुन को मज्जा देखि व्युत्पन्न छन्। यो उच्चतम गुणस्तर मानिन्छ। तर यो बाटो मा तेल को धेरै प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यसको फल मात्र 8-9% को मज्जा मा। Potrubuetsya पहाड जामुन फेरि प्रयोगमा ल्याउनु। र अझै, एक सानो बिट गरौं कसरी घर मा समुद्र buckthorn तेल, तर अत्यधिक ध्यान? को जामुन (एक Juicer cheesecloth मार्फत वा माध्यम) रस squeeze, फिल्टर र यसलाई रक्षा। तेल सतहमा नाउहरु र यसलाई आकर्षित। रस खाना उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।
कसरी वनस्पति तेल प्रयोग गरेर घर निकासी विधि मा समुद्र buckthorn तेल के? सूर्यमुखी, जैतून, मकै वा भटमास - तुरुन्त म प्रयोग परिष्कृत तेल बनाउन लागि भनेर भन्न पर्छ। तपाईं धेरै Naturopaths पनि खाना प्रयोग गर्न सिफारिस नगर्ने कपास, प्रयोग गर्न सक्दैन। यहाँ निकासी (निकासी) समुद्र buckthorn तेल को को तरिका को एउटा। 60 ° C मा ड्राई बेरी, पाउडर तिनीहरूलाई काट्नु र sotnoshenie 1 मा वनस्पति तेल संग मिश्रित: (मात्रा द्वारा) 2। अँध्यारो न्यानो ठाउँ, यो मिश्रण एक गिलास कन्टेनर5दिनमा infused थियो। topsheet तेल tinctures खर्च नगरेर, एउटै भोकमरी थियो, तेल को मात्रा को एक केक मा हालिएको। र त 3-4 पटक गर्छन्।
यो Altai गरिरहेका छ रूपमा कसरी घर मा समुद्र buckthorn तेल के? नोभेम्बर र डिसेम्बरमा Buckthorn फसल। शुद्ध - को पुरा स्वस्थ र धोए जामुन थिचिएको तेल को शीर्ष मा खडा (पहिलो तरिका हेर्नुहोस्) पछि संकलित छ जो Juicer, मार्फत रस squeeze। Pomace (अनाज र एक सेल जामुन) निःशुल्क-बहने अवस्थामा सुकेको। त्यसपछि ड्राई मज्जा एक गिलास वा enameled बर्तन मा खन्याइन् र यसलाई साबित तेल शीर्ष पातलो पत्र, भर्न 60 डिग्री गर्न गरम छ। दिन 14 त्यसपछि एक गाढा ठाउँमा मिश्रण राख्नु, तेल, भोकमरी छ बसे र तल तलछट ध्यान precipitate देखि decanted गरिएको छ भने। carotene को एकाग्रता वृद्धि गर्न तेल पहिले संकलित थिचिएको तेल मिश्रित हुन सक्छ छ।
अब तपाईं कसरी घर मा समुद्र buckthorn तेल बनाउन जान्दछन् कि, जसको लागि कुनै शङ्का छ। र विनिर्माण लागत पराई देखि खरीद भन्दा धेरै कम हुनेछ।
घरेलू तेल unquestionably छैन रूपमा फार्मेसी रूपमा सक्रिय, तर यो तैपनि एक चिकित्सकीय प्रभाव, विशेष जब topically प्रयोग हुनेछ।
लसुन संग कीडे को Enema: एक नुस्खा। छोराछोरीको आंतों कीडे: लक्षण र उपचार
सेन्ट जन्सको वर्ट धेरै रोगहरूको लागि एक उपचार हो
चिकित्सा नङ - फूल, लाभ
निको पार्ने जापानी कला - रेकी। नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन
घाँस Erwa उल्ली: प्रयोग र contraindications
एक नुस्खा: घर मा ईर्ष्या लागि पप सोडा र सिरका कसरी बनाउने
फ्लायरहरू को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण कसरी सिर्जना गर्ने। नियम र सुझाव
सास्काटून: बेरी ब्रश को रोपण र हेरविचार
भाषा, आन्दोलन: कसरी प्रत्येक अन्य जनावर संग कुराकानी गर्न
प्रकृति र आवेदन कारणहरू: सरसफाइ के हो
Moonwalk: यसको इतिहास र विकास
सीजेरियन खण्ड पछि अवधि प्रतीक्षा गर्दा?
इस्राएलका आँखा उपचार
को बार मा Parapet। अक्षर र parapets को प्रकार। निर्माण कार्य
प्राचीन भारत: प्रकृति र मान्छे। वर्णन, सुविधाहरू, जाति